Hay?ada isku xirka nabadda iyo xaquuqul aadanaha ee INXA oo Puntland ka codsatay dhawrida xoriyatul-qawlka. – Radio Daljir
Diseembar 24, 2012 2:04 g 0
Boosaaso, Sept, 22, 2012 ? Hay?ada isku xir xirka nabadda iyo xaquuqul aadahana xafiiskeeda Puntland ayaa walaac aad u daran ka muujiyay xariga ay tilmaamtay hay?addu in loo gaystay dad muwaadiniin reer Puntland ah,? arrintaasi oo hay?ada INXA ay ku tilmaamtay? mid aan loo marin hab sharci ah.
Shirjaraa`iid oo galabta uu kuqabtey magaalada Boosasso xiriiriyaha Hay?ada INXA ee gobollada Puntland Cabdi Faarax ?ayuu ?dawladda Puntlnad kaga codsatay inay xoriyadooda dib ugu celiso rag dhawaan ay xir xirtay dawladdu.
?Aad iyo aad ayay hay?adda INXA uga xuntahay tilaabooyinka ay xariga ah oo is daba-jooga ah oo oo maamulka Puntland Garowe uu igu gaystay, waxaana sharciyan arrimahaan ay u muuqdaan kuwo aan waafaqsanayn sharciga oo idil, tusaale ahaan sharciyada caalamiga ah, sharciga dawladda Soomaaliya ee xoriyatul-qowlka iyo waliba sharciga muwaadinta ee uu qeexayo Dastuurka Puntland” Sidaasina waxaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay Cabdi Faarax madaxa hay’ada INXA ee Puntlnad.
Hadalkaan kasoo yeeray madaxa gobollada Puntland u qaabilsan hay?adda isku xirka nabadda iyo xaquuqul aadanaha ee INXA Cabdi Faarax ayaa kusoo beegmaya xilli muran iyo mad-madaw siyaasadeed uu ka taagan-yahay deegaannada Puntland.
Maamulka gobolka Nugaal oo amar ku bixiyey inay magaalada Garoowe ka baxaan Ergooyin ka socda Mudug iyo Bari.